Android 7.1.1 Nougat သည် Samsung J5 (2016) တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည် Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပဆမ်ဆောင်း J5 (2016) ကိရိယာကိုပိုင်ဆိုင်သောကံကောင်းသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတင်း Android 7.1.1 လာပါပြီ တဖြည်းဖြည်းကဤဆိပ်ကမ်းရန်။ ၎င်းသည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှအသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ Samsung J5 ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (2016) ထို့နောက်ထိုအချိန်အထိသူတို့သည်သာပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ကြသည် အန်းဒရွိုက် Marshmallow.
ယခုအဘို့, update ကိုသာပိုလန်ရောက်ရှိခဲ့သည် Android Nougat ပါတဲ့ Samsung J5 ကိုတွေ့ပြီ ထည့်သွင်းထားသည်.
၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် operating system ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အဆင့်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ပြုလုပ်သည်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ရက်များသို့မဟုတ်နာရီများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် Android N မှတဆင့်ဥရောပ၌အခြားနိုင်ငံများ (စပိန်ပါဝင်သည်) အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် OTA.
Android N သည် Samsung J5 တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်
သင်၏ Samsung J5 terminal သည် Android Marshmallow နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုပြောပြပါလိမ့်မည် - Android Nougat နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒီ operating system က Samsung J5 ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေလိမ့်မယ်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းတွင်စိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုပါရှိသည် Samsung ကအတွေ့အကြုံ 8.1 ဘာမှမမှားဖြစ်ပါတယ် ဒါ ထိတွေ့မှုနှင့်မျက်စိကိုနှစ်သက်သောပိုမိုပွတ်တိုက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည် အဆိုပါဂန္ Touchwiz ထက်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုထိတွေ့စေပြီးသင်မလွတ်နိုင်သည့် Samsung တံဆိပ်ခတ်ထားပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းများစွာသောအခြားသတိထားမိနိုင်ပါတယ် အဓိကတိုးတက်မှုများ တစ်ဦးအဖြစ် ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုJ5 ၏လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုတစ်နေ့တာလုံးပိုမိုကြာရှည်စေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အန်းဒရွိုက် Nougat ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ယူလာ Terminal ၏ကင်မရာနှင့်အခြားသောယေဘူယျကဏ္inများတိုးတက်မှု။
Android Nougat သည် Samsung J5 ရရှိမည့် operating system ၏နောက်ဆုံး update ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့နောင်လည်းနောင်တရစရာမရှိတော့ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု J5 ခဏကျန်တော့လို့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Android 7.1.1 Nougat သည် Samsung J5 (2016) တွင်လာမည်။
ကောင်းပြီ၊ ၂၀၁၆ ၏နံပါတ် J5 သည် android 2016 ကိုမွမ်းမံတော့မည်မဟုတ်ပါ
J5s အားလုံးအတွက်ဖြစ်သောကြောင့် update ကိုလက်တင်အမေရိကသို့ရောက်သင့်သည်။ အသစ်သောအခြေအနေများသည်ဒေသအလိုက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီးအချို့သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အခြားသူများထက် ပို၍ ဦး စားပေးကြသည်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကသာကိစ္စပါပဲ။
နိုဝင်ဘာ6နှင့်စပိန်အတွက်ဘာမျှမ။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါ့အမှု၌တည်၏။
သတိပြုရမည်မှာ Samsung သည်တိုင်းနှင့်ဒေသတစ်ခုစီအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်ရက်အတိအကျကိုမပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မယ်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်မှာရောက်နေပြီးစပိန်ကိုဘာမှရောက်လာမယ်လို့မထင်ပါဘူး။
တိတ်ဆိတ် ဒီ update ကလာလိမ့်မယ်။ Androidsis မှသင့်အားအကြောင်းကြားရန် J5 (2016) ၏နောက်ဆုံးသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သတင်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမည်။
OTA ထွက်ပေါ်လာချိန် မှစ၍ တစ်လကျော်ကြာခဲ့ပြီးစပိန်သို့မရောက်ရှိသေးပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါသလား။
Carmen Arroyo အာရိုယို ဟုသူကပြောသည်
ယနေ့ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နှင့် ၇.၁.၁ နို့ရည်ကိုမပြီးဆုံးသေးပါကပြီးခဲ့သည့်လကရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရသည်
Carmen Arroyo Arroyo အားပြန်ပြောပါ
ဒီဇင်ဘာ5နှင့်ဘာမျှမ။ အဆိုးဆုံးကတော့စပိန်နိုင်ငံကစာရင်းရဲ့အောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘဲပိုလန်နဲ့အိန္ဒိယတို့နှစ်အတန်ကြာလွတ်မြောက်လာလို့ပါ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သူတို့ဖြန့်ကျက်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်း Patetico Samsung ။ ငါဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ...
Huawei သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၁၀၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည်